people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १३ गते मंगलबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १३ गते मंगलबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ १३ गते मंगलबार
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७४ साल आषाढ १३ गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ जुन २७ तारीख, आषाढ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी २४:३५ बजे सम्म चन्दमा कर्कट राशिमा सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, मंगलचौथीब्रत
भौतिक स्रोत साधनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनाले दिन मनोरञ्जन पुर्ण रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा साजेदारी फाईदा जनक नरहला । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको श्रमको उचित मुल्यांकन हुनेछ । सामान्य कठिनाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ ।
मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । एक्लो निर्णयले दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । प्रतिश्पदा मुलक कार्यमा तपाई अब्बल रहनु हुनेछ ।
सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानसिक समस्या आई पर्ने छन् । लेनदेन सम्बन्धी कार्यमा बिशेष सजग रहनु पर्ने छ । बादबीवाद को झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । तपाईको बाणीकोगलत अर्थ लाग्न सक्छ बोल्दा होशपूर्याउनु होला ।
मानसिक समस्याको सामना गर्नु पर्ला । सौदर्यकासाधानको क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्यक यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ ।
कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्राकृतिक तथा बितिय क्षेत्रको लगानिमा बिषेश लाभ प्रात्त रहनेछ ।
सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ । । भौतिक शुःख साधनको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । पारीवार तथा ईष्टमित्र सगँको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ ।
अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । दाजुभाई तथा मित्रजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यमा बिशेष फाईदा पुग्नेछ । साधारण यात्राको सम्भाबना रहको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
बोलिको प्रभुत्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै श्रम र समय खर्चीनु पर्ने योग रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । भोग बिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला ।
मनको चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा ब्यबधान प्राप्त हुने छ । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन् । सहि निर्णय गर्न नसक्नाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु परास्त्र रहनेछन ।
अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ । पठनपाठनको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यहरु सफल रहनेछन् ।